Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.4.3 Famaranana
Nizara fanangonana antontan'isa azo atao, ary amin'ny hoavy dia azo inoana fa anjara ny teknolojia sy ny matoantenin'ny atao fandraisana anjara.
Araka ny eBird maneho, nizara fanangonana antontan'isa azo ampiasaina ho an'ny fikarohana ara-tsiansa. Ankoatra izany, PhotoCity fa ny olana mifandray amin'ny santionany sy ny antontan-kevitra tsara dia mety solvable.
Ahoana no mety nizara asa fanangonana antontan'isa ho an'ny fiaraha-monina fikarohana? Zava-mahagaga ohatra dia avy amin'ny asan'ny Susan sy ny mpiara-miasa aminy Watkins ao amin'ny Malawi Journals Project (Watkins and Swidler 2009; Kaler, Watkins, and Angotti 2015) . Ao amin'ity tetikasa ity, 22 mponina eo an-toerana antsoina hoe "mpanao gazety" -kept "miresaka gazety" izay voarakitra, tamin'ny an-tsipiriany, ny resaka dia nandre mikasika ny SIDA eo amin'ny fiainany isan'andro ny olon-tsotra (tamin'ny fotoana dia nanomboka ny tetikasa, ny 15% ny olon-dehibe in Malawi no voan'ny VIH (Bello, Chipeta, and Aberle-Grasse 2006) ). Noho ny Insider toerana, ireo mpanao gazety dia afaka ny handrenesana azy tampoka resaka izay mety ho tsy azo nidirana ny Susan Watkins sy ny tandrefana fikarohana mpiara-miasa (aho hiresaka ny etika izany tatỳ aoriana ao amin'ny toko rehefa manolotra torohevitra momba ny nanaovany anao manokana faobe tetikasa fiaraha-miasa ). Ny tahirin-kevitra avy ao amin'ny Malawi Journals Project Nitarika ho maro ny zava-dehibe hitany. Ohatra, eo anoloan'ny tetikasa nanomboka, maro any ivelany no nino fa dia nangina mikasika ny SIDA ao amin'ny Afrika atsimon'i Sahara, fa ny gazety nampiseho fa izany dia mazava fa tsy ny raharaha: mpanao gazety nandre-jatony ny resaka momba ny foto-kevitra, amin'ny toerana toy ny samy hafa toy ny fandevenana , barany, ary ny fiangonana. Ankoatra izany, ny toetry ny resaka ireo hahatakatra tsara kokoa nanampy mpikaroka sasany ny fanoherana ny fampiasana fimailo, ny fomba fampiasana fimailo dia voaforona amin'ny fahasalamam-bahoaka dia tsy mifanaraka amin'ny hafatra an-dalana dia nisy noresahina tamin'ny fiainana andavanandro (Tavory and Swidler 2009) .
Mazava ho azy, toy ny angona avy eBird, ny angona avy any amin'ny Malawi Journals tetikasa dia tsy tonga lafatra, olana noresahina amin'ny an-tsipiriany avy Watkins sy ny mpiara-miasa aminy. Ohatra, ny ao resaka dia tsy kisendrasendra santionana rehetra azo atao resaka. Kosa, fa zava-tsy feno fanisam-bahoaka ny resaka mikasika ny SIDA. Eo amin'ny tahirin-kevitra tsara, ny mpikaroka mino fa ny mpanao gazety ireo mpanao gazety faran'izay tsara, araka ny hita amin'ny alalan'ny gazety ny tapaka sy manerana ao anatin'ny gazety. Ankoatra izany, rehefa ampy ny mpanao gazety dia Naparitaka tamin'ny toerana ampy kely sy ny tatitra mifantoka amin'ny lohahevitra iray manokana, leon'ny lasa azo atao, izay mampitombo matoky angona kalitao. , Ohatra, ny firaisana ara-nofo mpiasa antsoina hoe "Stella" nampiseho ny imbetsaka tao amin'ny gazety ny mpanao gazety efatra samy hafa (Watkins and Swidler 2009) . Toy ny tamin'ny PhotoCity, ny fampiasana ny leon'ny dia manan-danja ho an'ny fanombanana fitsipika sy ny fiantohana kalitao ao amin'ny antontan-kevitra nizara tetikasa fanangonana antontan'isa. Mba bebe kokoa ny fahaizanao maminavina ny hanangana, Table 5.3 mampiseho hafa nizara ohatra ny fanangonana antontan'isa ho an'ny fiaraha-monina fikarohana.
Table 5.3: Ohatra ny nizara tetikasa fanangonana antontan'isa amin'ny fikarohana ara-tsosialy.
Discussions mikasika ny VIH / SIDA any Malawi Watkins and Swidler (2009) , Kaler, Watkins, and Angotti (2015)
Street mangataka in London Purdam (2014)
Fifandirana zava-mitranga any atsinanan'i Congo Windt and Humphreys (2016)
Asa ara-toekarena any Nizeria sy Liberia Blumenstock, Keleher, and Reisinger (2016)
gripa fanaraha-maso Noort et al. (2015)
Rehetra ny ohatra voalaza ao amin'ity fizarana ity dia mandray anjara mavitrika fandraisana anjara: mpanao gazety tsoratra-dresaka izay reny; birders nampakatra ny birding checklists; na mpilalao nampakatra ny sary. Ahoana anefa raha toa ka ny fandraisana anjara dia mandeha ho azy ka tsy mitaky fahaiza-manao manokana na misy fotoana mba hanaiky? Izany no fampanantenana nanolotra ny "anjara Tsikariny" na "olona-centric Tsikariny.", Ohatra, ny Pothole Patrol, ny tetikasa ny mpahay siansa ao amin'ny MIT, niakatra GPS fitaovana accelerometers ao anatin'ny fito fiarakaretsaka cabs ao amin'ny Boston faritra (Eriksson et al. 2008) . Satria mitondra fiara mihoatra ny pothole ravina iray miavaka accelerometer famantarana, ireo fitaovana, rehefa napetraka tao amin'ny mampihetsi-po taxi, afaka mamorona pothole maps of Boston. Mazava ho azy, fa tsy tsapaka taxi sample lalana, fa nanome ampy taxi, dia mety ho ampy mba hanome vaovao mikasika ny momba ny lehibe tapany tanàna izy ireo. Faharoa, mahasoa ny matoantenin'ny atao rafitra izay miantehitra amin'ny teknolojia no izy de-fahaiza-manao ny dingana ny anjara Data: raha mitaky fahaiza-manao handray anjara amin'ny eBird (satria tokony ho afaka reliably hamantarana karazam-borona), tsy mitaky fahaizana manokana ny mandray anjara amin'ny Pothole Patrol.
Nony nandroso, Miahiahy aho fa maro no nizara tetikasa fanangonana antontan'isa hanomboka hampiasa ny fahaiza-manao ny finday izay efa nitondra ny an'arivony tapitrisa ny olona manerana izao tontolo izao. Ireo finday efa manana ny maro ny Sela Mpandray Hafanana zava-dehibe ho fandrefesana, toy ny mikrô, fakan-tsary, GPS fitaovana, sy ny famantaranandro. Ankoatra izany, ireo finday manohana antoko fahatelo-mpikaroka sasany fampiharana manampy fanaraha-maso ny fanangonana antontan'isa fototra protocols. Farany, ireo manana Internet-telefaonina fifandraisana, mahatonga azy ho azo atao ho azy ireo ny eny-hampidiran'izy ny angon-drakitra manangona izy ireo. Maro ireo olana ara-teknika avy amin'ny diso Sela Mpandray Hafanana ho voafetra bateria fiainana, fa ireo olana ireo dia azo inoana fa hihena rehefa mandeha ny fotoana toy ny teknolojia dia manangana. Olana mikasika ny fiainana manokana sy ny etika, amin'ny lafiny iray hafa, mety hahazo sarotra kokoa tahaka ny teknolojia dia manangana; Aho hiverina any fanontaniana ny fitsipika rehefa manolotra torohevitra momba ny nanaovany anao manokana faobe fiaraha-miasa.
Amin'ny nizara tetikasa fanangonana antontan'isa, mpiasa an-tsitrapo anjara angon-drakitra momba izao tontolo izao. Izany fomba Efa nampiasaina soa aman-tsara, sy ho avy fampiasana dia azo inoana fa tsy maintsy hiresaka santionany sy ny angona kalitao olana. Soa ihany fa misy ny tetikasa toy ny PhotoCity sy Pothole Patrol soso-kevitra vahaolana ireo olana. Araka ny tetikasa bebe kokoa manararaotra ny teknolojia izay manome fahafahana de-mahay sy ny matoantenin'ny atao fandraisana anjara, nizara tetikasa fanangonana antontan'isa dia tokony hampitombo be amin'ny ambaratonga, afaka mpikaroka mba hanangona tahiri-kevitra izay eny fetra fotsiny tamin'ny lasa.